Al Quds bilaa Cabdulbaari…Macquul ma aha | isbeddel
← Cabdiraxmaan Xuseen iyo Edward Said
Maajid Nawaz: Ma u hadli karaa muslimiinta Britain? →
Al Quds bilaa Cabdulbaari…Macquul ma aha
Si kedis ah ayuu dorraad Cabdulbaari Cadwaan xisaabtiisa uu ku leeyahay twitter-ka u soo geliyey hadal u dhigan: “waxa aan ka xun ahay in aan u sheego akhristayaashayda qiimaha badan in aan jariidadda al Quds al Carabi iska casilay dhammaan shaqooyinkii aan ka hayay”. Yaa! Waxa igu soo dhacday dhowr jeer oo hore oo la jabsaday xisaabta Cadwaan uu twitter-ka ku lee yahay oo qoraallo aanu lahayn la soo geliyey. Malaha waa sidii oo kale ayaan isku qanciyey. Waxa aan noqday malaha qofkii saddexaad ee ka warceliya go’aankan layaabka leh. Si kooban waxa aan u qoray : “maxay? Ma rumaysan karo. Malaha Cadwaan xisaabtaada waa la jabsaday! Haddii ay run tahay, aad ayaan kuu tebi doonaa”. Daqiiqado ka dib waxa uu xisaabtiisa soo geliyey: “go’aankani waa mid dhab ah, akhristayaashayda waxa aan sababta ugu faahfaahin doonaa qormadayda berri ee al Quds al Carabi”. Si weyn ayaan u sugay. Tolow maxay noqon kartaa sababta uu isku casilay? Miyaa la casilay mise wuu is casilay?
Maqaalkiisii maantu ma uu noqon mid weydiimahaa si toos ah uga jawaaba. Waxa uu ka hadlay sidii uu saxaafadda ku soo galay rubuc qarni ka hor. Waxa uu ka sheekeeyey markii uu la wareegay jariidadda al Quds halkii ay taallay iyo maanta halka ay marayso. Waxa uu sheegay in jariidaddaas oo noqotay mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan caalamka carabta gaar ahaan. Waxa ka shaqeeya 18 qof—laga bilaabo xoghaynta ilaa madaxa jariidadda. Jariidadda sidaa u weyni waxa ay ka soo baxdaa qol yar oo ku yaalla London; taas ayaa alla ha u naxariistee Maxamuud Darwiish, gabyaagii Falasdiin, ka keentay odhaahdiisii “jariidad weyn oo god ka soo baxda”.
Cabdulbaari sida laga filayay maqaalkiisan u danbeeyey wax uma dhihin. Waxa keli ah ee wax lagala soo bixi karaa waa “…waxa jiray dhinacyo igu cadaadiyey in aan go’aankan qaato”. Cabdulbaari waxa uu nus qarnigaa uu saxaafadda ku jiray noqday codadka ugu ixtiraamka iyo qaddarinta badan ee saxaafadda wax-iska-caabbinta. Dagaal adag ayuu la galay Yahuudda iyo imbaraaliyadda qooqan. Weligii kama gabban aragti uu aamminsan yahay, kama na masuugin sheegidda dhabta. Qadhaadh badan ayuu taas uga dhacay. Weerarro arxan daran ayaa ku soo laablaabtay. Waxa la isku dayay in codkiisa la aamusiiyo, qalinkiisana la jabiyo. Waxa loo diiday in uu jaamacadaha reer galbeedka ka hadlo, in laga jeediyo qoraalka, in ganacsi loo soo bandhigo, in fadhikulacag laga dhigo, in dhabsheegnimada lagaga iibsado wax wal oo uu isagu doono.
Intaas ba waa uu u dhabar adaygay. Weligii quud aan saxaafad ka soo gelin ma cunin—sida uu sheegay. Waxa uu ugu farxad badnaa dharaartii uu wiilkiisa curdeed dhashay iyo dharaartii buuggiisii u horreeyey madbacadda ka soo baxay. Weligii kama tageen ee waa laga tagsiiyey…wax kale kuma beddesheen saxaafadda xitaa haddii cumrigiisa dib loo duubo oo dhallaannimo iyo dhalinyarnimo lagu celiyo. Isla jidkii uu soo maray ayuu cagta la haleeli lahaa. Oo maxaa ka wacan in aad xaq u dirir ahaato. Oo yaa ka toosan cid dhabta ku tanaadday oo tidhi muslin baan ahay?
Cabdulbaari waan u darsan doonaa sida dad badani ila qabaan. Waxa aan si weyn u sugaynnaa buugga uu sheegay in uu gacanta ku hayo oo uu waayaha innagu soo fool leh ku hawllanaan doono.
Cadwaanow, waa ay adag tahay in la sawirto al Quds bilaa Cabdulbaari Cadwaan ah…Alle ha kula qabto hawshaasi…annagu na waan iskaga tacsiyeynaynnaa tegitaankaaga. Nooli kulantee.
Posted by Warfaa on Luulyo 12, 2013 in Uncategorized